GAFAM Isha Furan: Rafaayada Teknolojiyada ee doorbida Isha Furan | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalka Teknolojiyada bilaashka ah iyo kuwa furan maalin kasta way sii ballaarataa, maaha oo keliya dadka iyo ururada bulshada, laakiin sidoo kale u dhexeeya Ururada bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxaas oo dhan, waxaa ka mid ah Ururo badan oo gaar loo leeyahay oo khuseeya cilmiga tikniyoolajiyadda adduunka, kuwaas oo qaarkood lagu yaqaan magaca soo gaabinta «GAFAM».
Kuwaas, oo laga yaabo inayan aqoon u lahayn mawduuca «GAFAM», qoraal hore, waxaan ku sharaxnay asal ahaan «GAFAM» waa a gaabinta waxaa sameeyay xarfaha «Gigantes Tecnológicos» internetka (Webka), taasi waa, «Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft», kuwaas oo iyaguna, ay yihiin shanta shirkadood ee ugu sarreeya Mareykanka, kuwaas oo xukuma suuqa caalamiga ah ee dijitaalka ah, mararka qaarkoodna sidoo kale loogu yeero Shanta weyn (Shanta).
GAFAM iyo Bulshada Software-ka Bilaashka ah: Xakamaynta ama Gobannimada
Intii aan daabacaad kale oo hore ku soo bandhignay waxyaabaha soo socda:
Waqtigan xaadirka ah Afaraad Warshadaha Kacaanka, Nidaamka deegaanka ee qalabka (Codsiyada, Nidaamyada iyo Isbaarooyinka) ee «Software Libre y Abierto» doorbido korsashada «nuevas tecnologías», oo u oggolaanaya Ururradu inay noqdaan kuwo tartan badan oo faa'iido leh xilliyadan. In kasta oo cunsuriyadda aadamuhu sidoo kale fure u tahay, gaar ahaan heerka tababarka iyo hanashada qalabkan."
Sababta sababta, waa inaan u aragnaa wixii ka baxsan qadarin shakhsi ahaaneed inay tahay wax wanaagsan, habka sii kordhaya iyo horumarka ee korsashada iyo adeegsiga Teknolojiyada bilaashka ah iyo kuwa furan heerarka oo dhan iyo jilaa kasta. Si kastaba ha noqotee, si qof kastaa u sameyn karo qadarin wanaagsan arrintan, waxaan u soo jeedineynaa dhammaadka aqrinta daabacaddan si loo baaro waxyaabaha soo socda qoraallo hore lagu taliyay hoos, si loo ballaariyo loona hagaajiyo aragtidaada ku saabsan.
Software Bilaash ah oo Furan: Saamaynta Teknolojiyada ee Ururada
Cusbooneysiin iyo Software Bilaash ah: Mustaqbal wanaagsan oo tikniyoolajiyad ah
1 GAFAM Isha Furan
1.1 GAFAM Dhaqdhaqaaqa Isha Furan: Loogu Talo Galay ama Lagagasoo horjeedo Isha Furan
1.2 GAFAM Ku biirinta ilaha furan
GAFAM Isha Furan
GAFAM Dhaqdhaqaaqa Isha Furan: Loogu Talo Galay ama Lagagasoo horjeedo Isha Furan
Maanta, ururada dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxay si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqayaan isdhexgal weyn oo ah Software bilaash ah iyo ilo furan isaga moodellada ganacsiga, meheradaha, badeecooyinka iyo adeegyada. Taasi waa, ka tikniyoolajiyadaha bilaashka ah iyo kuwa furan waxay sii kordhayaan qayb muhiim ah oo ka mid ah habka looga shaqeynayo ama looga baxayo iyaga, iyadoo loogu daneynayo milkiilayaashooda, iyo macaamiishooda ama muwaadiniintooda.
Inta badan tani badanaa waxay u sabab tahay isticmaalka tikniyoolajiyadaha bilaashka ah iyo kuwa furan oggol yahay dardar galinta socdaalka iyo casriyeynta dhinaca daruuraha iyo teknoolojiyada kale ee cusub, a kharash badan oo la heli karo, waqti yar iyo heerar sare oo hufnaan iyo nabadgelyo dhammaan kuwa ku lugta leh.
Dabcan, inteenna oo dhami sida caadiga ah ma aragno habka iyo ku lug lahaanshaha hay'adaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, gaar ahaan kuwa Ragga farsamada (GAFAM) berrinkii Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux. Laakiin waa isbedelka, waana inaad si tartiib tartiib ah u aragtaa saameyn togan iyo mid taban falalkooda iyo ficilladooda.
Anigu shakhsi ahaan waan u arkaa inay tahay wax wanaagsan inkasta oo laga shakiyo, sababo laxiriira dhacdooyin badan oo caam ah iyo kuwa caan ah oo aan badanaa aheyn wax wanaagsan, qaasatan kuwa laxiriira ku takri falida xogtayada si aan waxyeello u gaarsiino asturnaanta, aqoonsi la'aanta iyo amniga internetka, badanaa.
Sababtaas awgeed, waxaan mar kale ku celinayaa in mid waliba waa inuu sameeyaa fikirkiisa ku saabsan, qoraallada horena lagu taliyay ayaa ah bar bilow wanaagsan oo ay ku abuuri karaan mid iyaga u gaar ah.
GAFAM Ku biirinta ilaha furan
Sida aad gadaal ka arki karto xiriir kasta oo la bixiyo, mid kasta oo ka mid ah Ragga Tech in ay ka mid yihiin GAFAM, wuxuu leeyahay heer sare oo koraya Furan Kataloogga Kumbuyuutarka qiimaynta mudan:
Isha Furan ee Google
Ilaha Furan ee Apple
Isha Furan ee Facebook
Isha furan ee Amazon
Ilaha Furan ee Microsoft
Nota: Qaar badan oo ka mid ahi waxay leeyihiin boggag rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan sida GitHub iyo Blogs khaas ah oo ku saabsan horumarkooda Ilaha Furan.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa sahmin soo socda 2 qoraal oo la xiriira maadada, si ay u sii wataan abuurista aragtidooda ku saabsan sida Ururada gaarka loo leeyahay midba midka kale la xiriira Il furan iyo iyaga Bulshooyinka (Shaqaalaha / Isticmaalayaasha / Macaamiisha). Iyo haddii dhaqdhaqaaqani uu sii kordhayo mid togan ama aan u ahayn Bulshooyinka berrinka iyo muwaadiniinta kale ee adduunka.
Xeerka Anshaxa ee mashaariicda laga helo ilaha Furan
DHAMMAAN: U hadal si furan U kobci si furan
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «GAFAM» iyo sida ay uga go'an tahay barnaamijka 'Source Source Software', oo ah dhaqdhaqaaq horumarineed oo sii kordhaya oo dad badani soo dhaweynayaan, kuwa kale oo leh tuhun iyo shaki, iyo kuwa kale oo gebi ahaanba diidmo ah, ayaa dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » GAFAM Isha Furan: Rafaayada Teknolojiyada ee doorbida Isha Furan
Gaafam wuxuu adeegsadaa oo uu dhiirrigeliyaa isha furan waxay lamid tahay doonista inuu u muuqdo mid wanaagsan oo ilaah iyo shaydaan, codsiyada waa inay damaanad qaadaan asturnaanta isha furanna had iyo jeer ma buuxiso shuruudahaas
Salaan, MX2048. Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, taasi waa sababta aan shakhsiyan ugu arko inay tahay wax wanaagsan, in kastoo shaki jiro.
Waxaan u arkaa inay tahay istiraatiijiyad lagu soo rogo heerarkeeda, iyadoo lahaansho leh, ay qaadaneyso waqti dheer in la kordhiyo
In lagu sii daayo ka sokow, waxay haystaan ​​suurtagalnimada inay haystaan ​​tobanaan kun oo 'shaqaale' ah si bilaash ah oo ay u horumariyaan wayna ku guuleystaan
Salaan, Nasher_87 (ARG). Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga iyo ka qayb qaadashada mawduuca.
Sixiroolaha Merlin dijo
Kaliya waxaan rabaa inaan xasuusto balantii Steve Jobs ee ahayd inuu sii daynayo maamuuska Facetime; Ma jiraa qof arkay? Waa hagaag in ...
Waan garwaaqsanahay si kastaba ha noqotee in dadaalka lagu daabacayo Swift ee Apple, uu ahaa wax wanaagsan, in kasta oo dhab ahaantii la xiiseynayo.
"Big Five" waxay xiiseynayaan inay keydiyaan xoogaa durillo ah waxa kuwa kale sameeyaan, laakiin ma wadaagayaan tooda, way fududahay.
Microsoft waligeed waxay ku saabsanayd qaadashada iyo qalqalgalinta heerarka si looga saaro gudaha.
Waad salaaman tihiin, Merlin Sixiroolaha. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga iyo ka qayb qaadashada mawduuca.
Qaybsi yar oo caan ah oo loo yaqaan 'GNU / Linux qaybinta' oo aan ku jirin DistroWatch